RASMI: Denmark oo ku dhawaaqday inay fureeyso xadka dhulka ee ay la leedahay Sweden & shuruud la socota (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RASMI: Denmark oo ku dhawaaqday inay fureeyso xadka dhulka ee ay la...
(Copenhagen) 09 Luulyo 2020 – Dalka Denmark ayaa Sabtiga furaya xadka uu la leeyahay gobolka Skåneland sida ay iminka faafisay hay’adda xakamaynta iyo kahor tagga cudurrada faafa ee Serum Institut (SSI).
Denmark ayaa horay u ogolaatay Västerboten, Kronoberg iyo Blekinge oo ka hooseeyey qoondada 20 cudurka ka qabta 100-kii kun ee qofba, waxaana loo fasaxayey Denmark. Waxaana haatan liiskaas ku biiraya gobolka Skåne.
Heerka cudurrada faafa ee Gobolka Skåne ayaa haatan maraya 13.8, taasoo ka hooseeysa 20, oo ah xadka ay dhigeen Denish-ku, marka loo qaybiyo 100-kii kun ee qabta cudurka Covid-19. Waa se inaad caddayn kartaa inaad deggan tahay meelaha aannu soo sheegnay.
Previous articlePuntland oo shirka Dhuusamareeb la tegeysa shuruudo adag (Ma socon doonaan maxaase ka mid ah?)
Next article”Ma jiro wax muddo kororsi ah waxaana la qabanayaa doorasho la isla ogol yahay” – RW Khayrre oo ku celiyey moowqifkiisii hore